साउदी अरब र इरानबीच युद्ध हुन लागेको हो?
HOME » साउदी अरब र इरानबीच युद्ध हुन लागेको हो?
डिसी नेपाल , २६ कार्तिक २०७४
बीबीसी। इरान र साउदी अरबबीच लामो समयदेखि दुश्मनी रहँदै आएको छ। तर पछिल्लो समय यी दुई मुलुकबीचको तनाव उत्कर्षमा पुगेको छ। दुवै देशका आफ्ना शक्तिशाली सहयोगी र शत्रुपनि छन्। आउनुस् हेरौं यदि इरान र साउदी अरबबीच युद्ध भयो भने कुन मुलुकले कसको साथ दिन्छन्।
सुन्नी बाहुल्य रहेको साउदी अरब इस्लामको जन्मस्थल हो। र इस्लामिक दुनियामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्थान साउदीमा अवस्थित छन्। साउदी अरब विश्वको सबैभन्दा ठूलो तेल निर्यात र धनी देश मध्येको एक हो।
साउदी अरबलाई इरान मध्यपूर्वमा हावी हुने डर छ। त्यसैले साउदी शिया नेतृत्वमा बढ्दै गएको भादिगार र प्रभाव क्षेत्रको शक्तिको विरोध गर्छ।
युवा र शक्तिशाली युवराज मोहम्मद बिन सलमान छिमेकी मुलुक यमनमा हूती विद्रोही विरुद्ध एक लामो लडाइँ लडिरहेका छन्। साउदीले हूती विद्रोहीलाई इरानले समर्थन गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ भने सो आरोपलाई इरानले अस्विकार गर्दै आएको छ।
साउदी अरब इरानको दाबीको विरोध गर्छ र सीरियाका राष्ट्रपति बशर अल–अशदलाई हटाउन चाहन्छ, जो इरानको मुख्य सहयोगी हुन्।
साउदी अरबसँग आधुनिक हतियारले सज्जित सेना छ, जो विश्वको सबैभन्दा धेरै हतियार आयातकर्तामध्ये एक हो। साउदीसँग दुई लाख भन्दा धेरै सैनिक छन्।
इरान १९७९ मा एक इस्लामिक गणराज्य बन्यो। त्यो बेला त्यहाँ राजतन्त्र हटाएर अयातुल्लाह खमेनीको नेतृत्वमा आफ्नो शक्तिले आफ्नो पकड बलियो बनायो।
इरानको आठ करोड जनसंख्यामा शिया मुसलमानको बहुमत छ। विगत केही दशकमा इराकमा सद्दाम हुसेनको युग समाप्त भएपछि मध्यपूर्व क्षेत्रमा इरान आफ्नो प्रभाव झन विस्तार गरिरहेको छ।
इरानले इस्लामिक स्टेट (आइएस) सँग लड्न सीरियाका राष्ट्रपति बखर अल–असदलाई ठूलो सहयोग गरेको छ। इराकको विशेष सेना इस्लामिक रेभोल्यूशनरी गार्ड कोप्र्स (आइआरजीसी)सीरिया र इराकमा सुन्नी विद्रोहीसँग युद्ध गरिरहेको छ।
साउदी अरबले लेबनानलाई अस्थिर बनाउने काम गरिरहेको इरानले आरोप लगाउँदै आएको छ। इरान एक शिया अभियन्ता हिजबुल्लाहको समर्थन गरिरहेको छ।
इरान अमेरिकालाई आफ्नो सबैभन्दा ठूलो शत्रुका रुपमा व्याख्या गर्छ। इरान आफूसँग केही अत्याधुनिक मिसाइल भएको पनि दाबी गर्छ। इरानमा सेना र आइआरजीसीका जवानलाई पनि समेट्दा कुल पाँच लाख ३४ हजार सेना छन्।
अमेरिका र इरानको सम्बन्ध निकै नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। १९५३ मा सीआइएले तत्कालीन इरानी राष्ट्रपतिलाई पदबाट हटाउन मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको थियो। १९८० मा तेहरानस्थित अमेरिकी दूतावासमा केही मानिसलाई बन्धन बनाइएको थियो।
अर्कोतर्फ साउदी अरबसँग अमेरिकाको घनिष्ट सम्बन्ध रहँदै आएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको इरान विरोधी गतिविधिका कारण दुई देशबीचको सम्बन्ध निकै सुमधुर भएको छ। ट्रम्पले ओबामाको समयमा अमेरिका र इरानबीच भएको परमाणु सम्झौता पनि अस्विकार गरेका छन्।
ट्रम्प प्रशासनले कहिल्यै पनि साउदी अरबमा कट्टरपन्थी इस्लामको त्यस्तो आलोचना गरेका छैनन्, जसरी उनले इरानको विरोध गर्छन्। त्यतिमात्र होइन, अमेरिकी राष्ट्रपतिको विवादित मुस्लिम ट्राभल ब्याण्ड मा पनि साउदी अरबको नाम समावेश छैन्।
मध्यपूर्वको आफ्नो पहिलो भ्रमणमा ट्रम्पले साउदी र इजरायली नेतासँग भेटवार्ता गरेका थिए। साउदी अरब अमेरिकाको हतियार बिक्रीको मुख्य क्षेत्र हो।
रुसको सम्बन्ध साउदी अरब र इरान दुवैसँग राम्रो छ। रुसको दुवै देशसँग आर्थिक गठबन्धन छ। रुस दुवै देशलाई आधुनिक हतियार बिक्री गर्छ।
तेहरान र रियादबीचको तनावको स्थितिमा रुस कसको तर्फ जान्छ यो अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन। यद्यपी रुस युद्धको अवस्थामा मध्यस्थ कर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
शीत युद्धका बेला सोभियत संघले सीरियाली सेनालाई हतियार उपलब्ध गराएको थियो। सीरियाली युद्धका क्रममा रुसले बशर अल असदको सहयोग गरेको थियो। त्यो बेला इरानले पनि सीरियालाई सहयोग गरेको थियो।
मध्यपूर्वमा जारी सैन्य र राजीतिक गतिरोधकाबीच टर्कीले इरान र साउदी अरबकाबीच एक सानो रेखा तानेको छ।
सुन्नी शक्तिका रुपमा टर्कीले साउदी अरबसँग आफ्नो सम्बन्ध निकै बलियो बनाएको छ। अर्कोतर्फ इरानसँग केही गहिरो मतभेदकाबीच पनि टर्कीले कुर्दिश प्रभाव कम गर्ने उद्देश्यले इरानसँग पनि सम्बन्ध सुधार गरिरहेको छ।
१९४८ मा बहुसंख्यक यहुदीहरुको देश इजराइललाई स्वतन्त्र घोषित गरिएको थियो। इजराइलको इजिप्ट र जोर्डनसँग कुटनीतिक सम्बन्घ स्थापित छ। इरान र इजराइल एक अर्काप्रति निकै कट्टर विरोधी हुन्। इरानले इजराइलको अस्थित्वमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ।
इजरायली प्रधानमन्त्री बिन्यामिन नेतन्याहूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग इजराइललाई परमाणु हतियार प्राप्त गर्नबाट रोक्न अपील गरेका छन्। इजराइलले मध्यपूर्वमा इरानको बढ्दो प्रभावलाई कम गर्न साउदी अरबसँगको सम्बन्ध बलियो बनाएको छ।
सीरियाली राष्ट्रपति बशर अल–असद इरानसँग नजिक छन्। जिहादीहरुसँग भएको युद्धका बेला इरानले सीरियाली सरकारलाई धेरै सहयोग गरेको थियो। लेबनानमा शिया संगठन हिजबुल्लाहलाई इरानी हतियार पुर्याउन सीरिया एक महत्वपूर्ण माध्यम हो।
हिजबुल्लाहले पनि सीरिया सरकारलाई सहयोग गर्न आफ्ना हजारौं लडाकु पठाएको थियो। सीरियाली सरकार साउदी अरबमाथि मध्यपूर्वमा विश्वंसक नीति अपनाएको आरोप लगाउँदै आएको छ।
साउदी र इरानको सम्बन्धमा लेबनानको व्यवहार मिल्दोजुल्दो देखिन्छ। लेबनानका प्रधानमन्त्री साद हरीरीले केही दिन पहिला साउदी अरबबाट आफ्नो राजीनामाको घोषणा गरेका थिए। उनीसँग साउदी अरबको निकै राम्रो सम्बन्ध थियो।
उता लेबनानमा हेजबोल्लाह इरानको नजिक मानिन्छ। इरानले यो संगठनलाई लगातार सहयोग गर्दै आएको छ। हेजबोल्लाहका नेता हसन नसरल्लाहले केही समय अगाडि मात्रै साउदी अबरको आलोचना गरेका थिए।
कतार, बहराइन र कुवेतको इरानसँगको तुलनमा साउदी अरबसँग राम्रो सम्बन्ध छ। यद्यपी यो वर्षको सुरुवातमा साउदी अरबले जब कतारलाई इरानसँगको सम्बन्ध विच्छेद गर्न गरेको आग्रहलाई कतारले अस्विकार गरेको थियो।
त्यसपछि जुलाइमा साउदी अबर, युएई, इजिप्ट र बहराइनले मिलेर कतारसँगको सम्बन्ध तोडेको घोषणा गरेका थिए। त्यो बेला इरानले कतारमा खाद्य सामाग्री पुर्याएर सहयोग गरेको थियो। गत अगस्ट महिनामा कतार र इरानबीच निकै राम्रो सम्बन्ध स्थापित भएको छ। उता बहराइन र कुवेत भने साउदी अबरको पक्षमा देखिएका छन्।